ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဒီမို ခရေဇီ”
Labels: Thai politics
It'safair view. I agree with you, Ko Paw.
ထိုင်းမှာလဲ နိုင်ငံရေး သမားတွေ ကွဲတော့ တိုင်းပြည် နစ်နာနေတာပါ။
ထိုင်းက တပ်ဆင်ကို ထောက်ခဲ့တဲ့ လူတွေ ဆူပူ ဆန်ါပြတာက ၈၈ တုန်းက ဒေါ်စုကြည်ကို ထောက်ခဲ့တဲ့ လူတွေ နေ့လည်ကြောင်တောင် ရန်ကုန်မြီုကလယ်မှာ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာလောက် မဆိုးသေးပါဘူး။
ဒီမိုခရေဇီကို ရေးထားတဲ့ ရှူထောင့်ကို သဘောကျပါတယ် ....။
မတူညီတဲ့ အမြင်ရှိတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ...။
လမ်းလယ်ခေါင်မှာ လူတွေကို ခေါင်းဖြတ်တာဟာ ...
ဘုန်းကြီးတွေကိုသတ်တာလောက် မဆိုးသေးပြန်ဘူးနော် ...။
တွေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီလို အဆုံးအထိတွေးစေချင်ပါတယ် ...။ half-way မှာမရပ်ထားပါနဲ့ ....။ တစ်ဖက်သတ် အမြင်က ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ ..။
ခေါင်းဖြတ်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတဲ့လူတွေ လို့ ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြောတာပါလိမ့်။
ကြုံတုန်း ၀င်ပြောဦးမယ် ဆိုတဲ့ လေသံကိုတော့ လျှော့ဖို့သင့်ပြီ။ စစ်တပ်ကို ဖားတာလဲ အချက်အလက် တိတိကျကျနဲ့ပြောပေါ့ မောင်လမ်းဆိုးရယ် ။
ကိုပေါ အမြင်ကို ထောက်ခံတယ်။ ထိုင်းအောက်ခြေပြည်သူတွေက နိုင်ငံရေးကို မသိဘူး။ သူတို့ ရနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဘာ့ကြောင့်ရလဲ ဆိုတာတောင် မသိဘူး။ ဒါတွေသိဖို့ ပါတီတွေက လုပ်ရလိမ့်ဦးမယ် ကျမတော့ အဲလိုမြင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ သူတို့ တိုင်းပြည် ခုလိုဖြစ်နေတာ။ နိုင်ငံရေးသမားကွဲလို့ ဆိုတဲ့ မောင်လမ်းသစ် ရွှီးချက်ကိုတော့ ဆန့်ကျင်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်ညီနေရင်တော့ မဟုတ်တဲ့နေရာ ညီနေရင်တော့ မဆလ လို တပါတီအာဏာရှင် ပြန်ဖြစ်သွားဦးတော့မှာပေါ့။ အတိုက်အခံဆိုတာလဲ ရှိကိုရှိရမယ့် တရား။ ဒါမှအာဏာရ ပါတီက မဟုတ်တာ မလုပ်ရဲတဲ့ ဘောင်နဲ့ ကွတ်ခြင်းတည်ရှိမှာ။ ဒီလိုပဲ မြင်တယ်။
ပရမ်းပတာဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက် ဆင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရေးဟာ အလားတူ တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်မှု၊ အကျိုးစီးပွား ပျက်ပြားထိခိုက်လာအောင် စနစ်တကျမဟုတ်တဲ့ ထင်ရာစိုင်းရမ်းကားမှုမျိုးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဟာ နိုင်ငံအစိုးရတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတာမို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အေ၇းယူမှုတွေကို လက်ခံပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ဗျာ.. အရင် အများပြည်သူရွေးကောက်လိုက်တဲ့ ပါတီကို ဆန္ဒပြတော့ အရေးပေါ်ကြေငြာလို့ နှိမ်နင်းစေတာတောင် ရူးသလို ပေါသလိုနဲ့ အိုက်တင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်ဟာ ခု ဘာလိုလိုညာလိုလို တက်လာတဲ့ လူက နှုတ်ထွက်ဖို့ ပယ်ချပါတယ်.. ဆန္ဒပြမှုတွေကို နှိမ်နင်းပါဆိုတဲ့ အကွက်ကို အားတက်သရော ၀င်ပါနေပုံကတော့ အင်း.. နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေးလို့ပဲ ငြီးမိပါတော့တယ်ဗျို့..
testing for blog said...
သက်ဆင်လား သက်ဆင်လားဗျ.... ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး... တပ်ဆင်လို့ခေါ်တာ တရုတ်စကားမပီသလိုများဖြစ်နေလားလို့...
ပြည်တွင်းသတင်းစာက (လူမဖတ်တဲ့)ဆောင်းပါးတွေလို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ပေါ်တင်ကြီး မလုပ်နဲ့လေဗျာ၊ သတိထားပါဦး။ ပြောကုန်ကြပြီဗျာ၊ ဘာတဲ့... "သူများဘလော့မှာ လာခိုကပ်ရပ်ပြီးမဆလ၊ န၀တ၊ နအဖရဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးတွေ လာမဖြန့်
စေလိုပါ".. တဲ့။ ရှက်စရာကြီးဗျာ။ အဲ.. လှဲတော့ မသေလိုက်ပါနဲ့ဦး ကိုယ့်လူ..။ ခင်ဗျားလိုလူ သေလို့မဖြစ်သေးဘူး။ နအဖ အသက်ဆက်ဖို့၊ ခင်ဗျားလိုလူကို အုတ်တချပ် သဲတပွင့်လို လိုအပ်နေတာ..။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ဘလော့ တခုထောင်ပြီး ရေးပြလိုက် စမ်း ဘာ.. နအဖကောင်းကြောင်း ဘလော့တခုလုံး မိုးလုံးပြည့် ရေးလိုက်စမ်းဘာ.....။ ခုလို ဘာမဟုတ်တဲ့ သူများဘလော့မှာ လာခိုကပ်ရပ်ပြီး၊ မစို့မပို့လေးရေးတာကိုပဲ ဒီလောက်ကြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြောခံရတာတော့ မတန်ပါဘူးဗျာ..။ လုပ်ဗျာ ပြန်ချဗျာ ခင်ဗျားဘလော့ကနေ..။ လက်သာ အသာတို့လိုက်.. ကျုပ်တို့ လာအားပေးမယ်..။
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်သင့်တာက တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့၊လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့ပဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေတောင်းဆိုသင့်တယ်။
သက်ဆင်ကို ထောက်ခံပြီး သက်ဆင်အာဏာပြန်ရရေးအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရှုဒေါင့် သက်သက်နဲ့ လုပ်နေကြရင်တော့ သူပြီးငါ..ငါပြီးသူ နဲ့ပဲ ဆန္ဒပြတဲ့ အလုပ်တွေက အဆုံးသတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
ခင်ဗျားအမြင်တွေက လမ်းဟောင်းက အမြင်တွေပါ။
တနည်းပြောရရင် နအဖ လက်ကိုင်တုတ်များ။ဆိတ်လစိ(ရိုင်းရင်ခွင့်လွတ်) သတင်းသမားများ။ဟိုခုန်ဒီခုန် နိုင်ငံရေးသမားများ ပြေနေကျ စကားတွေပါပဲ။
ခင်ဗျားစကားတွေ မဲပြာပုဆိုးထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါဦး။
Ko Paw Yay,
I will translate this post into english and show to Thai friends. :-) It isanice view.
Thai people are boring with such protests. I joke them to do like cowboy movie. Give two guns to Mr.Thaksin and current PM and let them shoot each other. The winner will become PM. Just kidding.
They also joke me to hire our army government only one day becoz they know how much our govn. is cruel.
I did not say this ok, butafriend speculated that.
"Yellow devils are sponsored by the queen so that current meat head crown prince can inherit the throne."